War wanaagsan ayaa maanta laga shaaciyey Oslo, Norway - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|War wanaagsan ayaa maanta laga shaaciyey Oslo, Norway
War wanaagsan ayaa maanta laga shaaciyey Oslo, Norway
Joshua Berger, Hogaamiyaha waaxda badaha ee gudoomiye Inslee, ayaa la wadaagay warkan weyn ee ku saabsan heshiis iskaashi kale oo muhiim ah oo maanta lagu kala saxiixday Nor-Shipping ee Oslo, Norway. Berger wuxuu la saxeexday heshiis is-afgarad isagoo ka wakiil ah Washington Maritime Blue dhigooda Xarummaha Nolosha ee Xarumaha Khabiirka Badaha Maritime CleanTech. Waxay u taagan tahay tallaabada xigta ee horay loogu qaadayo iskaashiga sii kordhaya ee Washington iyo Norway si wax looga qabto xalalka badda ee waara adduunka.
Safiirka Norway u fadhiya Mareykanka Kare Aas iyo Washington Lt. Governor Cyrus Habib ayaa taageeray heshiiska heerka sare ee bishii hore Madasha Blue Marit ee Seattle.
Lix shirkadood oo aasaasayaal ka ah Washington Maritime Blue ayaa ka qayb galaya Ganacsiga Nor-Shipping toddobaadkan: DNV-GL, Wartsila, Kongsberg, ioCurrents, Glosten iyo Corvus.
Booqo www.maritimeblue.org si aad wax badan uga barato horumarka Washington Maritime Blue, istiraatiijiyad buuxda oo gobolka ah oo loogu talagalay hormarinta hal-abuurnimada tikniyoolajiyadda nadiifka ah iyo hababka ugu wanaagsan ee lagu horumariyo “dhaqaalaha buluugga ah” - warshadaha badda ee waara iyo bulshooyinka adkeysiga u leh Washington iyo adduunka oo dhan.
Bartilmaameedka himilooyinka warshadaha maraakiibta ee yareynta qiiqa sanadka 2050 wuxuu u baahan yahay iskaashi xuduudaha oo dhan. Markay tahay Nor-Shipping laba qaybood oo waaweyn oo ka kala socda Norway iyo USA ayaa kala saxeexan doona heshiis lagu xoojinayo iskaashiga waddamada ee xalalka badda ee waara.
Talaadada 4ta Juun, iskaashi cusub oo u dhexeeya kooxda warshadaha Norwey ee NCE Maritime CleanTech iyo kooxda fadhigeedu yahay Seattle Washington Maritime Blue ayaa lagu saxiixi doonaa mid ka mid ah aagagga ugu muhiimsan ee maraakiibta maraakiibta, Nor-Shipping ee Oslo.
Warshadaha badaha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan xalinta qaar ka mid ah caqabadaha waaweyn ee deegaanka iyo cimilada ee adduunka soo food saaray. Sanadaha soo socda milkiilayaasha maraakiibta ayaa sidoo kale la kulmi doona xeerar adag oo deegaanka ah oo heer qaran iyo heer caalami ahba iyo warshadaha oo wajahaya bartilmaameedyo hami leh oo loogu talagalay dhimista qiiqa.
- Si loo gaaro yoolalkaan, waxaan u baahanahay inaan dedejino horumarinta iyo soo bandhigida xalalka qiiqa hoose iyo eber. Waxaan aaminsanahay iskaashiga ka dhexeeya kooxaha isku-xidhka badda ee adag sida annaga oo kale inay muhiim u tahay horumarkan. Wadashaqeynta maanta la saxiixay ayaa sidoo kale waafaqsan UNS Sustainability Goal 17 oo tilmaamaysa sida loogu guuleysto ajandaha horumarineed ee waara looga baahan yahay iskaashi dhexmara dawladaha, qaybaha gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidka ah, ayuu yidhi Hege Økland, oo ah madaxa NCE Maritime CleanTech.
- Waxaan ku faraxsanahay fursadaha iskaashigani u abuurayo iskaashi mustaqbalka ah. Waxaan rajeyneynaa xiriir dheer oo miro dhal ah oo ka dhexeeya wada-hawlgalayaasha badda ee Noorway iyo Washington, ayuu yidhi Joshua Berger, Hoggaamiyaha Waaxda Badaha ee Guddoomiyaha Gobolka Washington ahna Guddoomiyaha Washington Maritime Blue
Ujeeddooyinka hal-abuurnimada kordhay
Heshiiskan warshadeed wuxuu daba socdaa heshiiskii Is-afgarad ee iskaashiga teknolojiyadda badda cagaaran ee u dhexeeya hay'adda horumarinta dhaqaalaha qaranka ee Norway ee Innovation Norway iyo Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington ee Seattle bishii Meey. Saxeexa heshiiska is-afgaradka waxa goobjoog ka ahaa oo taageeray safiirka Norway u fadhiya Maraykanka, Kare Aas iyo Lieutenant Governor-ka Washington, Cyrus Habib.
Ujeedada ugu weyn ee iskaashiga ka dhexeeya cluster-ka Norwey iyo Mareykanka ayaa ah in shirkadaha xubnaha ka ah ay ka helaan faa'iido tartan wada shaqeyn midba midka kale.
Khibradeena waa in kooxdu ay tahay barxad muhiim ah oo soo dadajin karta hal abuurka iyadoo la isu keenayo wada-hawlgalayaasha, loo fududeynayo wadaagga aqoonta, la bilaabayo howlaha hal-abuurka iyo in laga caawiyo horumarinta silsilado cusub oo qiimo leh, ayay tiri sayskland.
Iskaashigan cusub wuxuu kaloo ku saleysan yahay aaminaad in wada-koox-koox-koox-wadaag ahi ay ka dhalan doonto ogeysiis hore oo ku saabsan horumarka cusub:
- Adeegsiga kheyraadka labada koox waxay xubnaheena siin doontaa aqoon hore oo ku saabsan tikniyoolajiyad cusub oo loogu talagalay codsiyada badda Waxaan sidoo kale aragnay in wadaagista aqoonta tikniyoolajiyadaha cusub ay inta badan horseedi karto hoos u dhac ballaaran oo ku yimaada waqtiga fulinta, ayuu yiri Berger.
Ku saabsan kooxaha
NCE Maritime CleanTech waa kutlada hogaaminaysa aduunka ee xalalka badda. Kooxda Norwey waxay leedahay shirkado xubin ka ah oo daboolaya dhammaan silsiladda qiimaha badaha. Shirkadaha shuraakada la ah ayaa hormuud u ah markay soo bandhigaan maraakiibta doomaha cusub, tamarta cagaaran maraakiibta isla markaana waxay bilaabeen xalal cusub oo horumarineed oo cusub oo loogu talagalay ganacsiga badaha nadiifinta adduunka oo dhan.
Washington Maritime Blue waa isbahaysi istiraatiiji ah oo loogu talagalay hal-abuurka badda iyo joogtaynta, waxayna u shaqaysaa sidii urur kutlada madax-bannaan si loo hirgeliyo Istaraatiijiyadda Gobolka Washington ee Dhaqaalaha Buluugga ah oo ay soo gudbiyeen Golaha La-talinta Innovation-ka Badbaadada Badhasaabka Jay Inslee. Sida iskaashi u dhexeeya warshadaha, waaxda dadweynaha, cilmi baarista & hay'adaha tababarka iyo ururada bulshada hadafku waa in la abuuro heer caalami, kobcaya, iyo warshado badeed waarta iyada oo loo marayo wadaagista aqoonta, iskaashiga R & D, ganacsiga, ganacsiga iyo horumarinta shaqaalaha.
Macluumaadka xiriirka wixii macluumaad dheeraad ah:
Hege Økland, Agaasimaha NCE Maritime CleanTech, hege@maritimecleantech.no
Marie Launes, Madaxa Isgaarsiinta, NCE Maritime CleanTech, marie@maritimecleantech.no, tel .: + 47 976 53
Joshua Berger, Aasaasaha / Guddoomiyaha Guddiga, Washington Maritime Blue, Joshua.berger@commerce.wa.gov, tel .: +1 206-747-0563
← Heshiisku wuxuu kobciyaa iskaashiga dhaqaalaha, xiriirka ganacsiga Ganacsiga ayaa abaalmarin ka badan $ 8.7 milyan si kor loogu qaado waxtarka tamarta iyo qorraxda ee dhismayaasha dadweynaha →